Uterqüe inopa A la Fresca, yayo nyowani SS21 yekutsikisa imba | Bezzia
Maria vazquez | 07/04/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Uterqüe nguva pfupi yadarika akaunza «A la Fresca», mupepeti mutsva unotora zvirevo zvefemu yemwaka uno mutsva-wezhizha 2021 mwaka watichangotanga. Zvirongwa zvine hunhu hwakasiyana kwazvo hunoratidza kutsunga uye tariro.
Futuristic tints uye zviyeuchidzo zvemakumi manomwe zvinosangana mune ino nyowani yekunyora matiri isu tinotenda kusvika kumatatu maitiro. Yekutanga inoshandisa nhema uye chena kune organic maumbirwo uye ruzivo. Yechipiri yakazvipira mukugadzira uye geometric kubvisa. Uye wechitatu?
1 Dema nechena
2 Mifananidzo pane mifananidzo
3 Ruvara uye paturu yekufukidza
Iko kusanganiswa kwemachira uye ruzivo machira akafuridzirwa neakasiyana maumbirwo ezvisikwa nyeredzi muzvipfeko zvitema nezvichena zveimba nyowani yekutsikisa. KuBezzia tinonyanya kuda kusanganiswa kwehembe yematehwe nemaziso uye nehembe yerineni yakarukwa. Asi isu hatigone kutadza kutaura madhirezi futi, nekuda kwekurova kwekushongedza kwavo.
Mifananidzo pane mifananidzo
Checkered prints hazviendi zvisingaonekwe pakati pezvakataurwa naUterqüe. Kunyangwe isu tisingafanire kungotaura nezve zvakadhindiswa, nekuti isu tinowanawo imwe yakasarudzika-miviri-mavara anodhindwa pakati peavo mazano: houndstooth. Ose ari maviri akasanganiswa kuburikidza nemapoplin kusvetuka uye mabhurauzi, donje mashati uye dzakarukwa majuzi ... Uye zvese izvi mune akanaka girini, bhuruu uye lilac toni.
Ruvara uye paturu yekufukidza
Kugadzira uye tarisiro zvinoratidzira zvakashinga zvitaera zveA la Fresca imba yekutsikisa. Kunyangwe zvishoma, zig zag inodhinda mumavara akajeka usaende usingaonekwe. Kunyangwe zvishoma kana ivo vakasanganiswa nemitsetse yekugadzira zvipfeko zvinongokodzera vakadzi vakatsunga uye vanozvivimba.
Hembe idzo dzinoiswa mune ino edhisheni dzakatove dzakabatanidzwa muUterqüe katalog uye idzo dzisingaite saizvozvo munguva pfupi iri kutevera. Saka kana iwe ukatarisa chipfeko, usafunge nezvacho zvakanyanya kana uchizoshaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Uterqüe inopa A la Fresca, yayo nyowani SS21 yekutsikisa imba